Ny Fanahin’ny Fahamarinana dia tsy azon’izao tontolo izao raisina satria tsy hitany ka tsy fantany (Jn 14, 17). Raha te handray ny Fanahy Masina isika dia mila mahafantatra Azy, mitombo fitiavana Azy isan’andro.
Izay miaina ny Tahotra an’Andriamanitra dia mazava loatra mandray koa ny Fanomezan’ny Fitiavana. Piété, Fitiavam-bavaka moa no andikana azy, fa fitiavana an’Andriamanitra ho Ray io, ary fitiavana ny olombelona rehetra tsy an-kanavaka ihany kosa satria mpiray tam-po ao amin’Izy Ray iombonana, fitiavana ny tontolo satria zavaboaarin’Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy inona fa fikolokoloana ny hasambarana maha-zanaka, ka hikatsahana ny fomba fiainana mifanaraka amin’izany araka ny ohatra nomen’i Jesoa. Raha tsy tia ny Ray isika dia mazava loatra fa tsy hanaja ny hafa ihany koa, zary rafy sy fahavalo ireo tokony ho mpiray tam-po ary mahazo laka ho azy ny fitsiriritana sy ny fialonana.
Alakamisy niakaran’i Jesoa any an-danitra